VAKINANKARATRA : Hampiakatra ny lentan’ny mpanao judo ny filohan’ny Ligim-paritra
Nanaitra ny hambom-pon’ny filohan’ny Ligim-paritry ny taranja Judo ao Vakinankaratra ny tsy fahazoan’ny Malagasy medaly betsaka nandritra ny fifaninanam-pirenena natao teto amintsika teo iny. 3 mai 2017
Raha oharina amin’ny tany afrikanina hafa anefa dia anisan’ny manana mpikatroka maro eo amin’ity taranja ity ny Malagasy.
Azo arenina tsara ary tsy natao hahakivy anefa izany raha ny fanazavana saingy mila fanomanana tsara. Izany indrindra no nahatonga ny Ligim-paritra Vakinankaratra eo amin’ny taranja Judo nanatanteraka fihaonana sy fifanandrinana teo amin’ireo klioba mijoro ara-dalàna ao Antsirabe, ny faran’ny herinandro teo.
Teny amin’ny Cfama Andrefantsenan’Asabotsy no natao io fifanandrinana io ka klioba roa no nandray anjara tamin’izany dia ny klioban’ny FCJA sy ny klioban’ny Felana Judo. Nahatratra 49 ny isan’ireo mpandray anjara izay nahitana sokajin-danja latsaky ny 66 kilao ka hatramin’ny sokajin-danja latsaky ny 18 kilao.
Nisy ny fanolorana medaly ho an’ny voalohany sy ny faharoa isaky ny sokajin-danja nandritra ity fifanandrinana ity saingy nisongadina tamin’izany ny fisian’ireo katita vao 6 taona monja izay efa nirotsaka sahady ho mpikatroka ary azo lazaina fa tena ho avin’ny taranja Judo tokoa. Mahafehy tsara ny taranja sy lalàna ary indrindra ny teknika fototra izy ireo na dia mbola zaza aza.Niavaka tamin’izany koa ny fifanandrinana teo amin’ny sokajy latsaky ny 18 kilao (poussins) izay nahazo ny medaly volamena Raboana Finoana, 6 taona avy ao amin’ny klioba Felana Judo rehefa nandavo an’i Annis Rabevazaha avy ao amin’ny klioba Felana Judo.
Ho an’ny filohan’ny Ligim-paritraVakinankaratra dia ny fikolokoloana ireny taninketsa ireny no tokony hifotorana fa ireny ny tena ho avin’ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Aorian’ity fifaninanana natao ny alahady lasa teo ity dia efa manomana fiofanana ho an’ireo mpikatroka sy ny mpanazatra ny Ligim-paritra eto Vakinankaratra mba hampiakarana ny lentan’ireo ateleta. Aorian’izay dia isy ny fiadiana izay ho tompondakan’ny Faritra eo amin’ny taranja Judo.
Toy izao ny vokatry ny lalao tamin’iny fifanindranana teo amin’ny klioban’ny FCJA sy klioban’ny Felana Judo iny : sokajy latsaky ny 18 kilao (poussins) nahazo ny medaly volamena ; Raboana Finoana, 6 taona avy ao amin’ny klioba Felana judo rehefa nandavo an’i Annis Rabevazaha avy ao amin’ny klioba Felana Judo. Pouusins latsaky ny 21 kg dia nahazo ny medaly volamena i Erwan Ralevazaha, Tany amin’ny sokajy latsaky ny 66kg zazalahy kosa dia Ralevazaha Voniniaina (FCJA) no nibata ny medaly volamena rehefa nandresy an’i Randriamanantena Fidel (Club judo Felana)